Imandarmedia.com: प्रचण्डलाई राजनेता बनाएको अपराधमा प्रकाश दाहाललाई फाँसी दिनुपर्छ ?
Articles » प्रचण्डलाई राजनेता बनाएको अपराधमा प्रकाश दाहाललाई फाँसी दिनुपर्छ ?
प्रचण्डलाई राजनेता बनाएको अपराधमा प्रकाश दाहाललाई फाँसी दिनुपर्छ ?
समाचारका लागि अनलाइनतिर आँखा डुलाउँदै थिएँ । एउटा अनलाइनले लेख्यो, ‘प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाललाई प्रबल जनसेवाश्री पदक’, ‘पदककै गरियो उपहास ।’
त्यसको मिनेट नबित्दै गालीको खजनाका लागि गौंडो कुरेर बसेकाहरु डुक्रिए, ‘पदककै अपमान भयो, बहुबिवाह गरे मात्रै पदक पाइँदो रहेछ ।’ प्रकाशले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका थिए ।
तर, भोलिपल्ट बिहानै महाकालीलाई कौडीको मोलमा मिल्काएका एक बरिष्ठ राजनेता बम्किए, ‘पदक पाउन कति वटी बिहे गर्नुपर्ने हो ?’ उनका चक्षुले ठान्यो, ‘प्रकाश दाहाललाई दिएको पदक महाकाली बेच्नुभन्दा बढ्ता नै राष्ट्रघाती छ ।’
राप्रपाका नेताहरु त राजावादी नै थिए, यो उनीहरुको आदर्श थियो । कांग्रेस नेताहरु राजतन्त्रभित्रै भाइअंश खोज्दै थिए, यो पनि जानेमानेकै तथ्य थियो । तर, रोचक तथ्य यो थियो कि साम्यवादको सपना देख्ने बामपन्थी नेताहरु पनि राजालाई विष्णुका अवतार ठान्थे ।
लेखिका : गयत्री शर्मा
गणतन्त्रलाई अपवित्र र दुर्वचनको पगरी भिराउँथे । विष्णुका अवतारको भजन किर्तन र पूजाआजाकै बलमा साम्यवादमा पुग्ने सपना देख्थे । प्रधानमन्त्रीका लागि दाम राखेर ढोग्दा पुग्थ्यो, बिन्तीपत्र लेख्ने एक पेज कागज भए हुन्थ्यो । तर, जनयुद्ध र गणतन्त्र भन्दै प्रचण्ड कुर्लिए, लाखौंले उनैलाई पछ्याए । दाम चढाएर र बिन्ती पत्र हालेर खाइने प्रधानमन्त्री पदका लागि एकाएक चुनाव लड्नुपर्ने भयो, बंशमा अंश खोज्न नपाइने भयो । यस्तो गणतन्त्रको अपराध गर्ने छुट प्रचण्ड र प्रकाशलाई कसले दियो ? त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने बाटो सजिलो बनाउन पनि प्रकाशलाई फाँसी दिनैपर्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको बिचल्ली थियो । पैसाको बिटो हात पारेर परिवारको जिन्दगी सपार्ने सपना बोकेर खाडी धाउनेहरु बाकसमा बाँधिएर फर्कन्थे । अघिल्ला सरकार लासको कर लगाउँथे र कार्यकर्तालाई दशैं खर्च बाँड्थे । तर, प्रचण्डले त्यसो गरेनन् । उनले ठाने, ‘देशको राष्ट्रियता खाडीको तातो घामसँग साटिँदै छ । मनमा राष्ट्रियताको ज्वालो बोकेर ५० लाख युवा विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाएका छन्, तिनीहरुका लागि केही न केही गर्नैपर्छ ।’ यो महत्वपूर्ण कामको जिम्मा तिनै प्रकाश दाहालले लिए । को–कहाँ अलपत्र पर्यो, कसको अवस्था के छ ? उनीहरुलाई कसरी उद्दार गर्न सकिन्छ ? आदित्यादी विषयमा प्रकाश दाहालले नै बढ्ता चासो राखे ।
उनले फोन, म्यासेज, भाइबर, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै माध्यमबाट आएका हुन्, आफ्नो सामथ्र्यले भेटेसम्म समस्या समाधान गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पीडामा मल्हम लगाउने काम गरे । कुम्भकर्णझैं मस्त निद्रामा रहेका सरकार र तिनका सारथिहरु भन्दा यो सरकार र कार्यशैली बिलकूल फरक थियो । यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हितमा काम गर्न पाइन्छ ? यो त सरासर राष्ट्रघात भएन ? त्यसैले प्रकाश दाहाललाई फाँसी दिनुपर्छ ।